2015ပြီလ3| 55 ၏စာမျက်နှာ 2020 | NAB သတင်းများ | XNUMX NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဧပြီလ (စာမျက်နှာ 3)
ခေတ်သစ် VideoFilm အနောက်တိုင်း Thriller "Broken မြင်း" ပြီးဆုံး
facility ဘောလီးဝုဒ်ညွှန်ကြားရေးမှူး Vidhu Vinod Chopra ကကနေပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်အဘို့အပစကိုင်တွယ်။ BURBANK, Calif. -ခုနှစ်တွင်အများအပြားလနှင့်နှစ်ဦးကိုတိုက်ကြီး spanning စီမံကိန်း, မော်ဒန် VideoFilm သည်သူ၏ဟောလိဝုဒ်ပွဲဦးထွက်မှာအိန္ဒိယထုတ်လုပ်သူ / ဒါရိုက်တာ Vidhu Vinod Chopra ကထဲကနေ Broken မြင်းများအတွက်နောက်ဆုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ, သစ်ကိုအနောက်တိုင်းသည်းထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Burbank-based စက်ရုံအယ်ဒီတာအဖွဲ့ညီ, အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ ...
Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုကော်ပိုရိတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Capture မှဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်လေဝိသည် Whitney နှင့်အတူ Times Square မှတဆင့် Hustles
New York, ဧပြီ 28, 2015-တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်လေဝိသည် Whitney အွန်လိုင်းချေးငွေကွန်ယက်ကိုသင်တန်းနည်းပြ Lendio နှင့်အတူ Staples '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အကျိုးတူမြှင့်တင်ရန်တစ်ကော်ပိုရိတ်စီးပွားဖြစ်ရိုက်ကူးနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးပေါ့ပါး Compass 20 တစ်ကိုယ်တော် 3-အဆင့်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာ tripod စနစ်ရှိသည်ဖို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှု, သူ့နောက်ကျောမှခါးကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းနည်းများ, တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ...
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ StreamScope (R) RM-40 ပိတ်ထားသော-စာတန်းထိုးစောင့်ကြည့်စှမျးအဘို့အ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
Princeton, NJ - ဧပြီလ 28, 2015 - Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့ StreamScope (R) RM-40 နှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်က-စာတန်းပိတ်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် NewBay မီဒီယာရဲ့အကောင်းဆုံး Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တီဗီနည်းပညာမဂ္ဂဇင်းအားဖြင့် 2015 NAB Show မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်, Show ကိုဆုပေးပွဲ၏အကောင်းဆုံးစံ၏ကျယ်ပြန့အပေါ်အခြေခံပြီးအင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး panel ကိုစစ်ကြောစီရင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ...
Nexidia QC v2.3 အဆိုပါ 2015 NAB Show မှာ IABM ဂိမ်း Changer Award ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိ
Atlanta - ဧပြီလ 28, 2015 - ။ Nexidia, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ audio ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများတစ်ဦးဦးဆောင်ပြုစုသူ, ယနေ့ Nexidia QC (TM) v2.3 က "စမ်းသပ်ခြင်း, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်" အမျိုးအစားထဲမှာ 2015 IABM ဂိမ်း Changer ဆုကိုကြေညာခဲ့သည် အဆိုပါဆုချီးမြှင့်တရားသူကြီးတစ်ဦးလွတ်လပ်သော panel ကိုခင်းကျင်းပြသ Nexidia QC v2.3 ယင်း၏အမျိုးအစားထဲတွင်ဦးဆောင်ထုတ်ကုန်ယူဆကြောင်းနေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြ ...
ဗီဒီယိုလွှအရည်အသွေး Enhance မှ bitmovin အတူ Up ကိုလမ်းကြောင်း 1 အသင်းများ
ဧပြီလ 1, 28 - - Path ကို 2015 မှစ. နယူး PiXiE Player ကိုဒီကုဒ်ဒါ Now ကို MPEG-Dash Clients တွေအနေနဲ့ San Diego ၏ bitmovin ရဲ့ bitdash အတူပေါင်းစည်း (TM) Suite Is Path ကို 1, အိုင်ပီအကြောင်းအရာပေးပို့တစ်ဦးဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ပြုလုပ်အတူတက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ၏ပြန်ဖွင်ပိုကောင်းအောင် bitmovin, Over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) streaming များဖြေရှင်းချက်နဲ့ cloud transcoding စနစ်များတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး ...
RTP AVIWEST ​​DMNG စနစ်နှင့်အတူ HD ကို transmission ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း, တိုက်ရိုက်သတင်းလွှမ်းခြုံခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေး
Saint-GRÉGOIRE, ပြင်သစ် - ဧပြီလ 28, 2015 - AVIWEST, ဗီဒီယိုအလှူငွေစနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားလူကြိုက်များသော (RTP), ဘိုလီးဗီးယားအတွက်အမျိုးသားရေးတီဗီကွန်ယက်မှ AVIWEST ​​ရဲ့ DMNG PRO140 3G / 4G ဗီဒီယိုက uplink စနစ်အားတပ်ဖြန့်တော်မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် transmission ကို၏ပေးပို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ စီမံကိန်းများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့နှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုစနစ်များကိုပေါင်းစပ် Rios y ကိုပေးခဲ့ကြသည် ...
စကင်ဒီနေးမီဒီယာဧရာမီးဖိုထဲက Group မှ ioGates မှစ. ရွေးချယ် cloud အခြေခံပလက်ဖောင်း
ဧပြီလ 28, 2015 - - ioGates, ခွဲဝေမှုအဘို့မိုဃ်းတိမ်ကို-based tools တွေကိုတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူ, converting နှင့်ရိုးရှင်းသော-အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာဖိုင်များကိုဖြန့်ဖြူး ioGates Professional က-အဆင့်ဗီဒီယို-မျှဝေခြင်းပလက်ဖောင်းဦးစီးဌာနများရဲ့တစ်ဖက်မှာနှင့်အပေါင်းအဖေါ်များကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ်နှင့်အတူမီးဖိုထဲက Group မှပူးပေါင်းကူညီပေး Web ကို interface ကို -use, စတော့ဟုမ်း-based မီးဖိုထဲကအုပ်စု, ယမ်အကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကမီဒီယာအဖှဲ့အစညျးမှာ ioGates-powered ပေါ်တယ် installed သိရသည်။ အဆိုပါပေါ်တယ်ဘို့ကလွယ်ကူစေမည် ...
36th အားကစားသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲကိုပံ့ပိုးဖို့ ChyronHego
ဂုဏ်သတင်းဆုပေးပွဲအစီအစဉ် MELVILLE, နယူးယော့၏သီးသန့်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီ Named ဒုတိယအတစ်နှစ်တာ, ChyronHego အဘို့ - ဧပြီလ 27, 2015 - တတန်းအတွက်ဒုတိယနှစ်တွင်အဘို့, ChyronHego အဆိုပါ 36th နှစ်ပတ်လည်အားကစားသူဟာ Emmy (R) ဆုပေးပွဲ၏သီးသန့်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကိုကမကထပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ (NATAS) ၏အမျိုးသားအကယ်ဒမီနေဖြင့်တင်ဆက်ခြင်း, အားကစားသူဟာ Emmy Awards ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ် ...